Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Malaayiin xirmooyinka baaritaanka guriga ee COVID-19 ayaa dib looga yeeray gudaha Mareykanka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Qaar ka mid ah 2,212,335 xirmo oo ay soo saartay shirkadda cilmiga bayoolajiga ee Ellume ee fadhigeedu yahay Australia laguna qaybiyay Mareykanka ayaa laga yaabaa inay muujiso natiijooyinka baaritaanka SARS-CoV-2 ee beenta ah.
Maamulka Cunnada iyo Dawooyinka ee Federaalka Mareykanka ayaa soo saara dib u soo celin degdeg ah oo ah xirmooyinka baaritaanka guriga ee COVID-19 ee khaldan.
Xirmooyinka baarista guriga ee dib loo soo celiyay ayaa muujinaya natiijooyin been abuur ah oo 'ka sarreeya-ka la aqbali karo' ee COVID-19.
Tijaabada lagu ogaanayo borotiinnada coronavirus, waxaa oggolaaday isticmaalka degdegga ah ee FDA sannadkii hore.
Fasalka aan xasuusto' ee malaayiin caan ah oo degdeg ah Qalabka baaritaanka guriga ee COVID-19 Waxaa soo saaray Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Federaalka Mareykanka (FDA).
Sida laga soo xigtay FDA, 'nooca ugu daran ee dib u yeerinta' ayaa la soo saaray sababtoo ah 2,212,335 xirmooyinka baaritaanka COVID-19 oo ay soo saartay shirkadda biotech ee fadhigeedu yahay Australia Ellum, oo lagu qaybiyey Maraykanka, waxay muujisaa natiijooyin been abuur ah oo 'ka sarreeya oo aan la aqbali karin'.
Xeer ilaaliyaha federaalka Mareykanka ayaa ka digay in isticmaalka xirmooyinka khaldan “ay sababi karaan cawaaqib caafimaad oo xun ama dhimasho.”
Tijaabada antigen-ka, ee lagu ogaanayo borotiinnada coronavirus, waxaa oggolaaday isticmaalka degdegga ah ee FDA sannadkii hore. Waxaa la heli karaa iyadoon warqad dhakhtar loo qorin dadka waaweyn iyo carruurta da'doodu tahay laba iyo wixii ka weyn, waxayna isticmaashaa muunado suuf ah oo sanka laga soo qaaday si loo ogaado inuu mid qabo COVID-19.
Qaar ka mid ah "meelo gaar ah," oo la soo saaray intii u dhaxeysay Febraayo iyo Ogosto ee sanadkan, ayaa hadda dib looga yeeray gudaha Mareykanka, iyadoo shirkaddu ay sheegtay inay kala shaqeysay mas'uuliyiinta inay si ikhtiyaari ah uga saaraan suuqyada ay saameeyeen.
Shirkaddu waxay bixisay raaligelinteeda "wax walba oo walbahaar ama dhibaato ah [macaamiisha] waxaa laga yaabaa inay la kulmeen natiijo wanaagsan oo been ah."
Natiijooyinka beenta ah ee 'ka sarreeya ee aan la aqbali karin', ee muujinaya in qofku qabo coronavirus marka dhab ahaantii aysan dhicin, waxaa loo sheegay FDA ugu yaraan 35 xaaladood. Ma jiraan natiijooyin xun oo been ah oo la ogaaday
Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha aan saxda ahayn wuxuu yeelan karaa cawaaqib nafta halis gelisa. Waxaa laga yaabaa in qofku helo daawayn khaldan ama aan loo baahnayn, oo ay ku jirto daawaynta ka hortagga fayraska iyo jidhka, oo uu la kulmo jug dheeraad ah oo ka soocday xubnaha qoyska iyo asxaabta.
Waxay sidoo kale u horseedi kartaa dadka inay iska indhatiraan taxaddarrada, oo ay ku jiraan ka tallaalka COVID-19, FDA ayaa tiri.